Ọgba aghara ọgbaghara na-apụta na Naples nke .tali
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » Ọgba aghara mgbochi mkpọchi malitere na Naples nke Italy
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọgba aghara mgbochi mkpọchi malitere na Naples nke Italy
Ime ngagharị iwe na-emegide mkpọchi malitere na Naples, Italy, bụ obodo nke atọ kacha buo ibu na Naples. Ihe kpasuru iwe a bụ oku gọvanọ kpọrọ maka nke ọhụrụ Covid-19 mkpọchi mgbe mgbasa nke coronavirus mebiri ndekọ ọhụụ ọhụụ.
Ndị na-eme ngagharị iwe gosipụtara iwu a na-alọta ma wakpo ụgbọ ala ndị uwe ojii n'okporo ámá Naples.
Na-akpọ “Nnwere Onwe!” Ìgwè mmadụ ahụ iwe ji zọrọ njem n'okporo ámá obodo ahụ n'abalị Fraịde, tinyere ụfọdụ karama, bọmbụ anwụrụ ọkụ na ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ na ndị isi ọrụ. Ndị ọzọ nwara iji ihe mkpofu rụọ ebe ndị a na-enweghị ihe mgbochi ma kpọọ ụfọdụ n'ime ha ọkụ. Ndị uwe ojii tinyere mmanụ na-anya mmiri ka ha na-achọ ịchụsa ndị ọgbaghara.
Vidio e tinyere na soshal midia na-egosi ebe ndị mmadụ na-awakpo ụgbọala ndị uwe ojii, na-amanye ndị uwe ojii ahụ ka ha pụọ.
Nnukwu ngagharị iwe a mere na Naples na ọdụ ụgbọ mmiri nke Salerno mere n'agbanyeghị agbanyeghị oge abalị n'abalị nke gọvanọ mpaghara nyere iwu wee bido na Fraịde. E nyere ndị bi na mpaghara ndịda Campania iwu ịnọ n'ụlọ site na 11pm ruo 5am ruo na November 13.
Ọha na eze were oke iwe mgbe Gọvanọ Vincenzo De Luca kwupụtara na Fraịde na mkpọchi "ozugbo" ruo ụbọchị 40 dị mkpa iji kwụsị mgbasa nke coronavirus. "Ihe data dị ugbu a na ọnụọgụ ọrịa ahụ na-egosi na ụdị ọ bụla nke ele mmadụ anya n'ihu adịghị arụ ọrụ," ka o kwuru, na-akọwa na ọ dị mkpa imechi "ihe niile," belụsọ maka azụmaahịa na-enye ọrụ dị mkpa, yana igbochi mmegharị n'etiti mpaghara.
"Achọghị m ịhụ igwe gwongworo jupụtara na akpati ozu," De Luca kwuru, na-ezo aka na onyogho jọgburu onwe ya nke ụgbọ mmiri ndị agha na-ebuga igbe ozu site na obodo mgbago ugwu nke Bergamo, bụ nke kachasị njọ worsttali n'oge ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ntiwapụ na March.
Wastali bụ mba izizi n'ụwa iji webata mkpọchi siri ike na mba niile, na Machị 9, mgbe nje ahụ mechara kpuchie usoro nlekọta ahụike na mpaghara ugwu Lombardy. Gọọmentị mechara bido iji nwayọọ belata ihe mgbochi ebe ọnọdụ ka mma. Agbanyeghị, a manyere ndị gọọmentị ịmeghachi usoro siri ike megide Covid-19 dị ka ọtụtụ mba Europe na-edekọ spikes na ikpe coronavirus na ọnwa ndị na-adịbeghị anya.